TOMATO PINK HONEY: SIFOOYINKA, ASTAAMAHA IYO SHARAXAADA KALA DUWAN - NOOCYO YAANYO
Bannaanka badan oo xirfadlayaal ah, iyo xitaa bannaanka u hiwaayadda, mar walba ku dadaalaan si aad u hesho dalag ka wanaagsan, taas oo iyaga ku qasbay in ay sameeyaan tijaabooyin qaar ka mid ah noocyada hadda jira ee khudaarta, miraha iyo nooca berry. Maalmahan, waxaan ku guuleysanay inaan soo saarno dalagyada qiimaha badan, oo ay ku jiraan yaanyo casaan ah. Waa maxay cajiibka ah ee ku saabsan noocyada kala duwan iyo nooca astaamaha u sameeyo bannaanka sida aad u badan? Aynu ogaano.
Miraha dabeecadda ee yaanyada (malabkii Pink) (halabuurka kiimikada, cabbirka, midabka, dhadhanka, qaabka, miisaanka)
Si aad u bilowdo sharaxaadda noocan ah yaanyo waa lagama maarmaanka u ah xaqiiqda ah in aanay ahayn Beelaha, taas oo macnaheedu yahay in yaanyada sida waxaa suurtogal ah in la diyaariyo tiro badan oo abuur ah sanadka soo socda. Kala soocMalabka pink" waxay ku siin karaan yaanyo yaryar oo yaryar, oo inta badan gaaraya 1.5 kg (waxaa la sameeyaa oo u rusheeyaa buraashka ugu horreeya).
Qaabka tamaandhadu waa wareegsan, midabka miro waa casaan, hilibka macaan, fareemka iyo sonkorta muuqaalka.
Tayada sifaha ee yaanyada "malab Pink" way ka duwan yihiin dhadhanka caadiga ah ee tamaandhada, sababtoo ah ma haystaan ​​dabeecad wanaagsan. Dhammaan yaanyada kala duwan ee noocaan ah waa qolal badan (4 iyo wax ka badan) waxayna ku jiraan xaddi badan oo qallalan.
Mirahaasi waxay leeyihiin khafiif ah khafiif ah, taas oo ah sababta ay u gebi ahaanba aan loogu habooneyn kaydinta iyo gaadiidka, iyo cabbirka ballaaran ee yaanyada waxay ka dhigtaa ikhtiyaarka aan habooneyn ee ilaalinta.
Waa muhiim! Marmarka qaarkood, meeshii cagaaran waxay u muuqataa meel u dhow tamaandhada taangiyada, laakiin haddii midhihii bislaado la dhigo meel u dhow inta lagu jiro Bisaylkiisa, way baabi'i doontaa.
Markaad dooranaysid abuur, hubi inaad soo akhrisid talooyinka iyo dib u eegista dadka degan xagaaga kuwaas oo horeba u lahaa wax ka qabashada noocyo casaan ah oo yaanyo ah oo ah dhul furan ama xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo. Qaar badan oo ka mid ah waxay tilmaamayaan suurtogalnimada in ay sii kordhaan "Pink Honey" xitaa xitaa carrada.
Haddii aad aamminsan tahay balanqaadyada soo saarayaasha, duurka yaanyada leh yaanyada waa in ay koraan qiyaastii 60-70 cm ee dhererka, laakiin sida uu qabo dib u eegista beeralayda iyaga oo ku kora xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, dhirta si degan waxay gaareysaa hal mitir.
Dabcan, koritaanka duurka u leh yaanyada, iyo tayada beergooyska waxay ku xiran tahay inta badan xaaladaha beerashada iyo daryeelka, sidaa daraadeed dhererka duurka inta badan waa kala duwan yahay 50 illaa 100 cm. Guud ahaan, yaanyadaas waxaa loo saari karaa noocyo kala duwan.
Bisaylashada muddada yaanyada malab ah
Tamaandho "malab Pink" waxay tixraacayaan noocyada bartamaha xiliga bartamaha. Laga soo bilaabo muuqaalka caleemaha koowaad ilaa bilowga fruiting, inta badan waxay qaadataa ugu yaraan 110 maalmood. Celcelis ahaan, yaanyada si buuxda u bislaadaan 110-115 maalmood, taas oo ah, dhammaadka xagaaga.
Beeridda abuurka ah ee geedo bilaabmaa bilawga (ee sii kordhaya ee aqalka dhirta lagu koriyo) ama ilaa dhamaadka Maarso (for beerto ee dhulka u furan). Goosashada ugu horreysa waxaa la helaa bisha Agoosto.
Waxay u fiicantahay in la sameeyo geedo laba jir, iyo kor u kaca tirada ugxan-sidaha, xoqan waa shardi.
Ma taqaanaa? Dhirta dhexdhexaadka ah ee caanaha ah ee tamaandhada ah waxaa ka mid ah: "Strawed Chocolate", "Cow Heart", "King of Siberia", "Marshmallow Chocolate", "Eagle Heart", "Black Baron", "Sevruga" iyo kuwo kale oo badan.
Tamaandhiga "malab Pink" ayaa si sax ah loogu yeeri karaa nooc cufan leh, laakiin arrimaha dibadda waxay si weyn u saameeyaan dhalidda iyo tayada dalagga.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad hesho natiijada ugu waxtarka leh, markaa marka aad dooranayso meel beeritaanka yaanyo ah, fiiro gaar ah u leh meesha ay toonta, digirta, basasha, iyo karootada horay u koraan (kaliya ka dib marka kale oo kale).
Beerta loo doorbidayo abuuritaanka yaanyo tufaaxa ah waa 50 x 40 cm, 3-4 geedo ah 1 sq. M, laakiin sida ugu dhaqsaha badan ee ay carruurtu u bilaabaan inay muuqdaan, waa in si dhaqso ah looga saaraa.
Waa wax aan macquul aheyn in la tixgeliyo xaqiiqda ah in noocyada la tilmaamay in aysan jeclayn waraabin badan, sidaa daraadeed, waa lagama maarmaan in la waraabiyo dhirta oo keliya marka dusha sare ee dhulka ay si buuxda u ruxayso.
Waa mid aan loo baahnayn in marka biyaha lagu waraabiyo si toos ah on warshadda, on caleemaha iyo stem. Sidoo kale, "Pink Honey" uma dulqaadanayo heerkul aad u sarreeya ama heerkul hooseeya, taas oo si xun u saameeysa dhalidda.
Waa muhiim! Tamaandho ee noocyada la tilmaamay ayaa aad u nugul kulaylka, Sidaa darteed, iyada oo ay la'aanta miro, waxay si xun u xidhxidhnaa, iyo kuwa weli u bislaaday ma awoodi doonaan inay ku farxaan leh tiro ballaaran. Heerkulka ugu fiican ee biqilka abuurka ah waa +25 ° C, iyo koboc iyo horumar dheeraad ah + 15 ... + 30 ° C.
Haddii aad u hoggaansanto dhammaan shuruudaha beerashada iyo daryeelka, ka dibna hal bushaji waxaad heli kartaa ilaa 6 kg oo yaanyo ah. Bacriminta oo la isticmaalo marmar xilli xili ah waxay ka qaybqaataan kordhinta tiradaas: bilowga hore ee korriinka iyo 30 maalmood ka dib quudinta koowaad.
Xulashada habboon ee hawshu waxay noqon doontaa isku-dhafka biyaha-ku-jira oo ay ku jirto potassium iyo fosfooraska. Beeralayda badankoodu waxay xusuusantahay in yaanyada casaanka ah ay badanaa soo saaraan burooyin 3-4 ah oo mira dhal ah, iyo sababta oo ah xajmiga ugu dambeeya ee iyaga ka mid ah, midhaha badanaa ma laha wakhti ay u bislaadaan. Si kastaba ha ahaatee, kala duwanaanta noocaas ah ayaa weli ah mid waxtar badan "Bull Heart" oo la mid ah.
Siyaabaha ay u kobcin yaanyo malab ah
Qaar ka mid ah saxarka casiir leh ee tamaandhada iyo miraha qurux badan ayaa natiijada ah ee habka hore loo doortay ee beerashada. Xerada dhexe, waxaad ku kori kartaa "malabka Pink" ee lagu koriyo, lagu koriyo, weelal xaddidan, isla markiiba dhulka hoostiisa, baalalka cawska ama bacaha isku dar ah ciidda, iyo sidoo kale hoyga ku-meel-gaarka ah.
Iyadoo la tixgelinayo in cimiladu tahay mid hooseeya meelaha ku yaal waqooyiga, yaanyadaas waxaa ugu wacan geedo, kuwaas oo gacan ka geysanaya in la tirtiro khatarta aan loo baahnayn (geedo ayaa marka hore lagu meeleeyaa suxuunta la nadiifiyey, ka dib marka ay koraan, waxaa lagu beeray dhul furan oo la ilaaliyo).
Ma taqaanaa? Midhaha yaanyada "Pink Honey" waxay leeyihiin dareen isku celcelis ah si ay u dillaacaan, sidaa daraadeed uma baahnid inaad ka fekertid meesha aad ku jilcin lahayd yaanyada iyo jajabyada.
Guud ahaan, yaanyada fasalka la cayimay waa ikhtiyaar u habboon beerashada carrada furan. Waxay si firfircoon u soo saaraan kore-tallaalka (waxay si fiican uga soo reynayaan isla markiiba) oo ay sameeyaan ugxan.
Isla mar ahaantaana, markii ay ku koraan xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, gardarro gaar ah ee koritaanka waa la dareemi karaa, taas oo ah, dhirta si deg deg ah koraayo width, oo ku allabaryaya koritaanka ee height.
Kala duwan yaanyo "Pink Honey" waa ikhtiyaar weyn oo samaynta salad dhadhan fiican leh iyo xitaa macaanka. Cuntada laga abuuray miraha ma aha oo kaliya dhadhan fiican, laakiin sidoo kale nafaqo leh.
Baraamijyo badan ayaa si gaar ah u kala soocaya casiir yaanyo, yaanyo yaryar, kaneecada, yaanyo yaanyo iyo noocyo kala duwan oo suugo iyo dhaymo. Mid kasta oo ka mid ah suxuunta, dhadhanka hodanka ah ee yaanyada "Pink Honey" ayaa lagu muujiyay xoog buuxda.
Waxa kaliya ee aanad u isticmaali karin yaanyada asaasiga ah ee qaabka loo ilaaliyo, sababtu waxay ku jirtaa maqaar aad u khafiif ah (sida aynu hore u soo sheegnay, tani waa nooc salad, sidaas darteed bangiyada, yaanyada ayaa si fudud u gurgu noqon doona "boorash").
Dhadhanka miraha kuwan waa inuu hubiyaa taageerayaasha noocyada kale ee yaanyada, inkastoo maqnaanshaha dhadhanka iyo carafka, dabeecadda oo dhan yaanyada, badanaa waxay ka hortagtaa in ay u qadariyaan noocyada kala duwan. Sidoo kale, bannaanka qaar ka mid ah heer sare ah macaan, laakiin haddii aad rabto in aad u isticmaali kartaa.
Cudurka caabuqa cudurku
Mid ka mid ah cilladaha of noocyo non-hybrid of yaanyada, taas oo sidoo kale ka mid ah "Pink Honey", waa daciif aan daciif ah ee cudurada. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqadani ma noqon karto caqabad culus si loo helo beeritaanka guuleysta ee yaanyadaas.
Xilliga iyo daryeelka saxda ah ee dhirtu waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka fogaato dhibaatooyin badan ama baabi'iso waqtigooda, inkastoo cidina aysan ku siin 100% damaanad ah guusha hababkaas.
Waxa kaliya ee aad ku kalsoon tahay waa ka hortagga cudurka. Tusaale ahaan, tuhunka koowaad ee dabiiciga goor dambe (dhibco madow ama necrosis waxay u muuqdaan caleemaha yaanyada), waxaa lagama maarmaan ah in si deg deg ah loo hirgeliyo dhirta (ma ahan wax dhib ah haddii ay jiran yihiin ama caafimaad qabaan).
Ujeedadaas, diyaarinta fungicidal (tusaale, Ridomil) ayaa loo isticmaalaa. Intaa waxaa dheer, si looga hortago dhacdada dabaylo goor dambe waxay caawineysaa:
u hoggaansanaanta shuruudaha farsamooyinka waraabka (biyaha waa inaanay ku dhicin caleemaha);
beeritaanka duurka yaanyada si gooni gooni u ah ka soo duurka baradho;
xalinta daaweynta ka hortagga Bordeaux fluid.
Marka laga hadlayo dagaalka lagula jiro caaryada cawska ama fusarium, daawooyinka fungicidal waa in sidoo kale loo isticmaalaa hab wakhti ah. Way wanaagsan yihiin maaha oo kaliya sababtoo ah waxay u dhaqmaan dhirta, laakiin sidoo kale sababtoo ah waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin ka hortag ah. Laga soo bilaabo caleemaha saameeyeen iyo miraha isla markiiba takhaluso.
"Malab pink" waa in lagu beeraa sariiraha halkaas oo ay bakteeriyada, kaabajka ama radishes koray sannadkii hore, kaas oo siin jiray ciidda leh xubno muhiim u ah koritaanka tamaandhada.
Noocyo yaryar oo la yiraahdo oo yaryar waa in la quudiyo iyada oo aan laga reebin Bacriminta dabiiciga ah. Wixii yaanyada kor ku xusan, waxaad isticmaali kartaa xalka digada ama digada digaag ah ee qayb ahaan 1 bacriminta qayb ahaan 10-12 litir oo biyo ah.
Sidoo kale, geedi socodka ah ee koritaanka seedling, waxay noqon lahayd mid wanaagsan in la sameeyo laba supplements ka Bacriminta macdanta: ugu horeysay - on 10-kii maalmood ka dib dhererka geedo, iyo 10-15 maalmood kadib markii.
Ujeedadaas, xalalka soo socda ayaa loo isticmaalaa: 5, 15 iyo 30 g oo ah amooniyam, kalamiidka potassium iyo superphosphate waxaa lagu daraa 10 litir oo biyo ah. Marka la samaynayo heerka quudinta labaad ee Bacrimintaan ayaa labanlaaban. Warshad kasta waxay leedahay qiyaastii hal galaas oo xal ah.
In kasta oo xaqiiqda ah in noocyo non-hybrid ma leeyihiin heer sare oo iska caabin ah cudurada, tani ma ka hortagaan inay ku raaxaystaan ​​caan ka sarreeya ee bannaanka u.
Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad ka ilaaliso yaanyadaada cimilada xun, kaliya ku beeri geedaha aqalka dhirta lagu koriyo, iyo dhammaan waxa loo baahan yahay goosashada aadka u fiican waa tiknoolajiyada beeraha ee kartida leh ee dalagyada beeraha ah (diyaarinta ciidda haboon, xakamaynta nidaamka nalalka, bacriminta waqtigeeda iyo korriinada koritaanka, geedo adag iyo tan d.)